निगमका २५ पाइलटको सामूहिक राजीनामा, बाँकी रहेका सबैले राजीनामा दिने तयारी
२०७६ माघ १० शुक्रबार १०:०३:००
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका नेपाली पाइटलले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । नेपाल वायुसेवा निगमका २५ जना पाइलटले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् ।
निगमको इतिहासमै पहिलो पटक यति धेरै पाइलटले एकै पटक राजीनामा दिएका हुन् ।
निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने पाइलटहरुले राजीनामा दिएका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने पाइलटमा ४० जना नेपाली छन् भने विदेशी १५ जना छन् । ४० जनामध्ये २५ जनाले विहिबार सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् । अन्य नेपाली पाइलटले पनि राजीनामा दिने तयारी गरेको एक पाइलटले बताए ।
उनले भने,“अहिले उहाँहरु काठमाडौंमा हुनुहुन्न, आएपछि अरु पाइलटले पनि राजीनामा बुझाउनुहुन्छ ।”
निगम व्यवस्थापनले विदेशी पाइलट र स्वदेशी पाइलटबीच विभद गरेकाले राजीनामा दिन बाध्य भएको ती पाइलटले बताए ।
उनले भने, “विदेशी पाइलटको ट्याक्स पनि निगमले तिर्छ र उनीहरुलाई १३ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म दिन्छ । नेपाली पाइलटले उनीहरुले भन्दा डबल काम गर्छन् तर तलब बढीमा २ लाख रुपैयाँ भन्दा हुन्न ।”
निगमले नेपाली पाइलटको केही समयअघि दुई महिनाको तलब नदिएको र विगत पाँच महिनादेखि बिनासूचना एक लाख रुपैयाँ पनि अतिरिक्त रकम काटेको गुनासो पाइलटको छ ।
उनले भने,“ट्याक्स पनि काटेको छ, अतिरिक्त १ लाख रुपैयाँ पनि काटेको छ, अनि हामीले कसरी काम गर्न सक्छौं?”
दुईवटा छन् माग
राजीनामा दिएका नेपाली पाइलटको दुई वटा माग छन् । पहिलो, विदेशी पाइलटको ट्याक्स निगमले तिरिदिए जस्तै नेपाली पाइलटको पनि तिर्नुपर्ने । अर्को, ट्याक्स तिर्न नसक्ने भए नेपाली पाइलटलाई करारमा लिनुपर्ने । निगममा स्थायी भएर मात्रै केही नभएको भन्दै कि ट्याक्स तिरिदिनुपर्ने कि करारमा काम लगाउनुपर्ने ती पाइलटहरुको माग छ ।
राजीनामा दिएका पाइलट के भन्छन् ?
विदेशी पाइलटहरुको ट्याक्स नेपाल एअरलाइन्सले नै तिरिरहेको छ । उनीहरुलाई १३ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म पनि दिइरहेको छ ।
नेपाली स्थायी पाइलटहरुको हकमा व्यवस्थापनले सूचनाबिना केही समयअघि २ महिनाको तलबै दिएन । त्यसपछि पनि पछिल्लो पाँच महिनादेखि हरेक महिना ट्याक्स काटेर पनि अतिरिक्त एक लाख रुपैयाँ काटिरहेको छ ।
किन काटेको त्यसको जानकारी छैन । विदेशीले ४५ घण्टा उडाउँछन् । नेपाली पाइलटले ९० घण्टा उडाउँछन् । ९० घण्टा उडाएर पनि नेपाली पाइलटले धेरैमा २ लाख रुपैयाँ नत्र १ लाख मात्र पाइरहेका छन् । जबकि विदेशी पाइलटले नउडि १५ लाख पाइरहेका छन् ।
कुनै पनि पैसा काट्दै छ भने के कारणले काट्दैछ भन्ने थाहा दिनु पर्दैन ? कुनै पनि सुचना नदिइ केही समयअघि दुई महिनाको तलब नै दिएन । पछिल्लो पाँच महिनादेखि हरेक महिना अतिरिक्त १ लाख रुपैयाँँ काटिरहेको छ, तर किन काटेको जानकारी गराइएको छैन ।
हामीले भनेको के हो भने विदेशी पाइलटको ट्याक्स निगमले तिर्छ भने नेपाली पाइलटको पनि निगमले नै तिर्नुपर्छ ।
त्यसले हामीलाई राहत हुन्छ । यदि त्यो गर्न व्यवस्थापन सक्दैन भने हामीलाई करारमा लिए हुन्छ ।
स्थायी भएर केही फाइदा छैन ।
हामी करारमा काम गर्न तयार छौं । यी दुई वटा माग पूरा गर्न सक्दैन भने हामीले भनेका छौं आगामी तीन महिनापछि निगममा फर्कदैनौं ।
राजीनामाको तयारी जनवरी १७ मै
नेपाली पाइलटहरुले जनवरी १७ अर्थात् माघ ३ गतेदेखि नै यसबारे जानकारी गराइसकेका थिए । एकैपटक नेपाली पाइलटहरुले राजीनामामा हस्ताक्षर गर्न नसक्दा बिहीबार मात्रै राजीनामा बुझाएका हुन् ।